Dimitar Berbatov oo ka hadlay xaalada adag ee haatan ka dhex taagan kooxda Manchester United – Gool FM
(Manchester) 07 Sab 2018. Dimitar Berbatov ayaa ka hadlay ayaa ka hadlay dhibaatada ka dhex taagan kooxda Manchester United ee ku aadan khilaafka ka dhexeeya Jose Mourinho iyo Pogba.
Jose Mourinho iyo Paul Pogba ayaa la fahansan yahay inuu ka dhexeeyo khilaaf tan iyo xili ciyaareedkii lasoo dhaafay, taasoo ka dhigtay in laacibka reer France uu raboodo ka tagiska garoonka Old Trafford.
“Koox kasta ee weyn waxaa ku sugan ciyaartoy taye sare leh ee doonaya inay guuleystaan, waxaana mararka qaar dhici karta inay iska hor yimaadaan saaxiibadood ama macalinka kooxda”.
“Laakiin waa wax iska caadi ah in arimahan oo kale ay ka dhacaan kooxaha kubada cagta gaar ahaan kuwa waaweyn, dhamaanteen waxaanahay bini’aadam, waan qaldami karnaa, laakiin waa inaan diirada saarnaa gudaha garoonka”.
“Aniga waxaan kooxda ka ahay banaanka laakiin ma doonayo in Jose Mourinho ama Pogba midkoodna uu ka dhaqaaqo kooxda Manchester United”.
Mid ka mid ah xiddigaha Real Madrid oo SHULUQ ku sheegay Ronaldo isla markaana sheegay inuu ka tagi lahaa kooxda haddii uu...!!